Paul Scholes oo si weyn u dhaleeceeyay hab dhaqanka Jose Mourinho - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
November 8, 2018 at 11:02 Paul Scholes oo si weyn u dhaleeceeyay hab dhaqanka Jose Mourinho2018-11-08T11:02:30+00:00 CAYAARAHA
(Manchester) 08 Nof 2018. Xidigii hore khadka dhexe kooxda Manchester United ee Paul Scholes ayaa si weyn kaga soo hor jeestay fala celintii uu Jose Mourinho ku hor sameeyay jamaahiirta Juventus, kadib marka uu soo idlaaday kulankii xalay ka dhacay Allianz Stadium.
Manchester United ayaa guul cajiib ee soo laabasho 2-1 ah kaga gaartay kooxda Juventus Allianz Stadium, kadib markii ay labada kooxood fooda isku dareen kulankooda afaraad ee wareega group-yada tartanka Champions League.
Paul Scholes ayaa inta uu ku gudi jiray waa jibaadkiisa shaqo ee shabakada PT Sport ee ah falaqeynta kulankan ayaa wuxuu si weyn u dhaleeceeyay fal celinta uu sameeyay kadib ciyaarta.
“Hab dhaqanka, ma ahayn inuu sameeyo, wuxuu wajahayaa meel kasta oo uu tago”.
“Wuxuu helay natiijo fiican, waxay ahayd inuu gacan qaado macalinka kooxda kale, ama uu jamaahiirta salaamo, uma maleenayo inuu u baahanaa sameynta fal celin noocan oo kale ah, lakiin tani waa dabeecadiisa”.
« AU mission probes into civilian deaths in Mogadishu
Hir-Shabeelle oo taageero Millateri siinaysa Macaawisleyda la dagaalameysa Shabaab »